Multitasking sy rindrambaiko efijery Dual Pro miaraka amin'ny fahatongavan'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | | iPad Pro, iPhone, About us
Hamafisina hatrany ny fikorontanan'ny tsaho rehefa manakaiky ny hetsika ampahibemaso ataon'ny Apple, ary tsy ho latsaky ny roa herinandro talohan'ny WWDC 15, izay antenaina handefa ny iOS 9 sy Apple TV vaovao havaozina. Na izany aza, toa nisy singa vaovao nanampy ny statistikanay, Tonga ny iPad Pro miaraka amin'ny fahafaha-mampiasa kaonty mpampiasa samihafa amin'ny fitaovana iray ihany ary koa ny kaody dia manambara fa ny iPad dia hanana ny fahafaha-miasa amin'ny varavarankely samihafa, hizara efijery, izay mety ho multitasking eo no ho eo sy eo noho eo.
Apple dia voalaza fa efa nikasa ny hampiditra multitasking efijery fisarahana amin'ny iPad miaraka amin'ny iOS 8, saingy hita fa tsy nampiseho fiantohana ampy sy fitoniana eo amin'ny sehatry ny asa ny rafitra hampidirina azy ao anaty fitaovana, ka nanapa-kevitra ny hanadio bebe kokoa. manolotra rafitra mendrika. Fomba fanaovana Apple izay tato ho ato dia tsy dia hitantsika loatra.
Apple dia hampiseho ny asan'ny efijery fisarahana amin'ny iOS 15 amin'ny WWDC 9 manaraka, fa ho an'ny iPads ihany izao, na dia eo aza ny fitaovana toa ny iPhone 5S dia tsy misy dikany izany ary amin'ny iPhone 6 dia mety tsy dia ilaina loatra izany, isika Tokony ho ao an-tsaina fa ny efijery iPhone 6 Plus dia hamela izany tsy misy olana. Ireo efijery mizara ireo dia haseho arakaraka ny filan'ny fampiharana tsirairay eo anelanelan'ny 1/2 ny efijery sy ny 2/3 ao aminy, tsy mamela ny habe hanandrana ny tenany. Rehefa mizara ny efijery dia hapetraka arakaraka ny fampiharana ny habeny, azontsika tsara fa ny Twitter ohatra dia hipoka ny 1/3 amin'ny efijery, raha ny YouTube kosa kosa dia handray ny 2/3, hanome ohatra azo ampiharina. Na izany aza, tsara kokoa ny sary noho ny teny arivo ary etsy ambany dia mamela santionany amin'ny mety ho izy isika, miorina amin'ny hevitra noforonina ho an'ny iOS 8.
Mampitandrina ireo mpampahalala fa ity endri-javatra ity dia efa tonga ao amin'ny beta voalohany an'ny iOS 9 fa mety hisintona ny tsy fandriam-pahalemana. Na izany aza, tsy maintsy miresaka momba ny iPad Pro isika, izay mifandray akaiky amin'ity endri-javatra ity dia hitondra fahagagana hafa ihany koa, afaka miditra amin'ny kaonty maro samihafa ao amin'ny iPad Pro izahay, fanaovana azy ho fitaovana mahazatra sy manokana miaraka amina fetra vitsy dia vitsy, na izany aza, araka ny fandalinana ny kaody anatiny an'ny kinova iOS ho an'ny iPad Pro dia mampiseho fa hatreto dia kinova tsotra ho an'ny iOS ho an'ny iPad ihany no lehibe kokoaNoho izany, Apple dia tsy maintsy miasa mafy raha te hanova azy io ho fitaovana famoronana fa tsy ho an'ny mpanjifa, toy ny ankehitriny. Etsy ankilany, Apple dia mandinika ny famolavolana endrika sasany manasongadina ny iOS toy ny ivon'ny fampandrenesana sy ny fiasa fototra hahatonga ny iPad Pro hiasa bebe kokoa.
Manantena izahay fa ny kinova vaovao ho an'ny iPad "antitra" dia misy fifandraisana ivelany toy ny USB na USB-C avy any Apple, izay mety hiteraka kojakoja maro karazana.
Raha miverina amin'ny zavatra tiantsika isika dia toa ny tsaho momba izany Apple dia hifantoka amin'ny fitoniana sy ny fahombiazan'ny iOS 9 mamela ny fanavaozana mba hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa tsara indrindra ary ny tonga lafatra, na eo aza izany dia hanatsara kely ny Sarintany ary hanana endritsoratra vaovao. Isaky ny akaiky kokoa ny WWDC ary tsy ho adinontsika izany.
Ity mety hisaintsainantsika an'i Apple hifantoka amin'ny fanatsarana ny iOS ity amin'ny alàlan'ny fanombohana ny iOS 9 dia raisin'ireo mpampiasa marobe, izay tototry ny fandefasana fanavaozana tsy tapaka feno vaovao sy ireo bibikely mifandraika amin'izany, fa mila zavatra bebe kokoa izahay ny fitaovana, ny fahalavorariana ary ny fanatsarana toa azy ireo talohan'ny nampiavaka azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Multitasking sy iPad Pro misy fizarana roa miaraka amin'ny fahatongavan'i iOS 9
Chelito gonzales dia hoy izy:
Ho tonga amin'ny iPhone 5 ve izany?
Valiny tamin'i Chelito Gonzales
Edwin V. Arache dia hoy izy:
Eny, saingy ho toy ny ios 7 amin'ny 4 ary ios 8 amin'ny faha-4 fa tsy dia be tsiranoka.
Valiny tamin'i Edwin V. Arache
Nicolas Nieto Martinez dia hoy izy:
Manantena aho fa hiasa amin'ny Iphone 9 ny IOS 5 ...
Valiny tamin'i Nicolás Nieto Martinez
Raha lazaina amin'ny teny hafa, Apple dia MANOKANA BADLY zavatra efa nataon'i Samsung hatramin'ny 2012, izay RAHA VOAZANA NY ANJARA NAHASOA ny efijery fisarahana, dia manohana ireo fampiharana SCREEN FLOATING ihany koa izy ary fanohanana appa tsy manam-petra toa azy koa miaraka amin'izay.
Miresaka matotra ary tsy misy fanatisme: ny asa marobe amin'ny iOS sy Android dia eo am-piandohan'ny fahakeliny. Na dia eo alohan'i Apple aza i Samsung dia mbola voafetra ihany amin'ny fampiharana sasany.
Faly mahita anao indray.
Mampahery ahy izany, satria fantatro fa raha manome hevitra ianao dia satria tsara ilay lahatsoratra ary miteraka resabe.
Indray mandeha indray, misaotra anao namaky anay ary afaka namelombelona ny tolakandro tamin'ny fanehoan-kevitra mahazatra anao.
Mampihomehy ny hevitrao momba izany. Raha ny fahalalako azy dia nanana varavarankely marobe i Apple ho an'ny… http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS Samsung dia tsy namorona na inona na inona. Tsy manana rafitra manokana ...
Virginia Salvatori dia hoy izy:
Tsy ho avy amin'ny iPhone 4s ve izany?
Valiny ho an'i Salvatori Virginia
Ronal Tex Espinoza Gil dia hoy izy:
Ny efijery tena kely dia ho mora ho an'ny plus
Valiny tamin'i Ronal Tex Espinoza Gil
Tsy haiko raha maneso na mifaly am-pitiavana fotsiny ny hevitr'i Miguel Hernández. Raha maneso, dia ratsy io. Raha mifankatia izany dia matahotra aho milaza fa ny firaiketam-po dia tsy iray amin'ireo teboka loharano niavinao.
whosecrespo dia hoy izy:
Lazao hoe tompon-daka, Samsung no namorona ny varavarankely sy ny kifafa.
Manana telefaona Android aho ary tsy dia malahelo ny iPhone taloha, saingy isaky ny mampiasa takelaka Android aho dia tsy haiko ny tsy hahita ny iPad-ko. Tahaka ny tsy fahitana ireo endri-javatra toa ny varavarankely marobe, ny tena izy dia ny katalaogin'ny fampiharana ho an'ny iPad dia taona vitsivitsy miala amin'ny katalaogin'ireo rindranasa noforonina fa tsy navotana ho an'ny takelaka Android.
Mamaly an'i whosecrespo
Andraso ny Anti Jobs, fa malahelo aho, ary rehefa afaka kelikely, dia ho maimbo… .. afaka manome hevitra momba an'io lohahevitra io ihany koa ianao, mazava ho azy fa mahasoa, antenaiko fa tsy hisy izany. Raha ny marina, tiako ny fanesoana, azo antoka fa tsy ianao, satria mahatonga anao ho vazivazy.
whosecrespo sy Pablo Aparicio Azonao lazaina amiko ve izay nolazaiko fa namorona multitasking i Samsung? Tsia, miandrasa, hovonjeko ianao izay manahirana anao amin'ny fitanisana ahy indray:
Raha lazaina amin'ny teny hafa, Apple dia COPYING BADLY zavatra izay efa nataon'i Samsung hatramin'ny 2012, izay RAHA VOAZANA NY ANJARA Namboarina ho an'ny efijery fisarahana, dia manohana ireo fampiharana SCREEN FLOATING ihany koa izy ary fanohanana azo tsapain-tanana amin'ny fampiharana mihodina amin'ny fotoana iray ihany.
Aleo apetrakao manokana: zavatra efa nataon'i Samsung hatramin'ny 2012
Ary ho teboka farany: Aza mampiasa ny teny hoe "famoronana"
Miresaka momba ny fitaovana manodidina ny 1000 dolara isika, OS iray tena marin-toerana ary orinasa iray izay mirehareha ho lohalaharana (ampahany ihany koa no marina) izay hanolotra ho zava-baovao izay ampiasain'ny mpifaninana akaiky azy indrindra ho an'ny roa taona. taona, ary ho tampony dia ampiharina tsara kokoa.
Aleo hatsahatra ny fanatika ary aleo mitsikera kokoa. Amin'ity indray mitoraka ity dia manandrana mivarotra fitaratra sy setroka ho antsika i Apple.
Tsy namaly anao aho, raha tsy «Uff», izay milaza fa «Apple« tsy mamorona »ary tsy mamorona» milaza fa efa naka tahaka ny varavarankely marobe avy amin'ny Samsung i Apple, raha ny zavatra tena lojika indrindra dia ny Apple mandika ity asan'ny ny rafitra misy azy.
Heveriko fa tsy ho tonga amin'ny 4s izy io, heveriko fa manomboka amin'ny 5 na dia tsy hanome soso-kevitra azy ireo aza aho hanavao ny 5 sy 5s ho an'ny zava-bita (noho izany dia mitranga amin'ny 4 sy 4 amin'ny iOS7 sy 8)
Pablo Aparicio: fialantsiny azafady, amin'ny fizotran'ny valin'ny valinteny: Miguel Hernandez, uff ary ianao, toa izany tokoa.
Ankehitriny, rehefa dinihina ny zava-misy dia tsy ratsy loatra ianao. Apple tato ho ato dia natokana amin'ny fividianana orinasa (toy ny israeliana voarohirohy amin'ny fampandrosoana Kinect) na hampiasa hery fikitihana izay efa natao hatrizay (ny fijerena haingana dia mitovy amin'ny fahitana an'habakabaka Samsung).
Mihoatra ny orinasa mpamorona, Apple dia orinasa malaza. Ary zavatra tena tsara izany; Tsy hisy smartphone sy takelaka be raha tsy ho azy ireo izany.
PS: Wow! Valiny 16. Tsy tsara ve ny fitsikerana sy ny ady hevitra?
Javier: Misy ihany koa ireo mpiara-miasa izay mankafy mihinana diky. Ka zavatra tianao dia izany, tsiro fa tsy fahamarinana tanteraka.
“Mihoatra ny orinasa mpamorona, Apple dia orinasa malaza. Ary zavatra tena tsara izany; tsy hisy smartphone sy takelaka be raha tsy ho azy ireo.
Manaiky tanteraka. Mino aho fa tsy tokony hanao fahadisoana amin'ny fampifandraisana ny "fanavaozana" amin'ny "famoronana." Ny fanavaozana, na dia tsy tiantsika aza, dia mamorona na manatsara izay misy. Nanomboka ny tantarany i Apple tamin'ny fanaovana ny rafitr'izy ireo avy amin'ilay noforonin'ireo "bandy mahantra" tao Xerox. Xerox no raim-pianakaviana an'ny interface window sy ny totozy, saingy tsy nahomby tamin'ny fandefasana zava-dehibe izy ireo. Ny zavatra hafa rehetra dia mitovy: ny iPod dia mpilalao MP3 nohatsaraina. Ny iPhone dia finday nohavaozina indray, ny Touch ID dia sensor namboarina indray hiasa amin'ny 360 degre, sns ...
Heveriko fa be dia be ny adihevitra sy ny "fifandirana" misy eo amin'ny olona manohitra an'i Apple (na Google) no manomboka manakorontana ireo zavatra ireo.
Ops manokana, lalao voalohany miaraka amin'ny Unreal Engine 4